अन्तर्राष्ट्रिय समाचार Archives - Filmy Hotline
बीबीसी। भारतले पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिएका भारतीय वायुसेनाका विमानचालक अभिनन्दन वर्तमानलाई मुक्त गर्ने र स्वदेश फिर्ता पठाउने घोषणाको स्वागत गरेको छ। भारतीय सेनाका अधिकारीहरूले उक्त कदमबाट आफूहरू ‘निकै हर्षित’ भएको बताएका छन्। भारत पाकिस्तानको इतिहासमा सम्भव त कुनै देशले युद्धबंदी यति छिटो रिहा गरेको पहिलो पटक हो जुन इमरान खानेले पुरा गरेर विश्व जगतमा प्रसंसित भएका छन्।उनलाई शुक्रवार अपराह्ण दुवै देशका पन्जाब राज्यको वाघा सीमामा भारतलाई हस्तान्तरण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। तर पाकिस्तानका गतिविधिहरूप्रति आफू सतर्क रहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ।कश्मीर क्षेत्रमा तनाव बढेसँगै अहिले नियन्त्रणरेखाका दुवैपट्टि दशौँ हजार सैनिकहरू तैनाथ छन्। युद्धको त्रासले त्यस भेगका सयौँ बासिन्दाहरूले घर छाडिसकेका छन्।पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देशको संसदको संयुक्त सत्रमा बोल्दै त्यस कदमलाई ‘शान
काठमाडौं । ओलम्पीक खेलमा पाँच स्वर्ण पदक जित्ने अमेरिकी तैराक मिसी फ्रकलिनले गएको वर्ष आफ्नो खेल जीवनबाट छुट्टी लिइन् । सन्यास पछि उनले एक बयान दिईन जसले सबैंलाई हैरान गरायो । उनले भनेकी थिइन् हिन्दू ग्रन्थहरुले मानिसलाई मानसिक शान्ति दिन्छन् । २३ वर्षीय तैराकले सेवानिवृत्ति पछि मनोरञ्जनको लागि योग गर्न थालेको बताइन् । तर हिन्दू धर्मको बारेमा जाने पछि उनको झुकाव आध्यात्मिकताको पक्षमा आयो । उनले जर्जिया विश्वविद्यालयमा धर्म अध्ययन गर्दैछिन् । फ्रैंकलिनले लारेसको विश्व खेल पुरस्कार लिने बेलामा भनिन, “मैले गएको एक वर्ष देखि धर्म अध्ययन गरिरहेको छु । यो धेरै आकर्षक र आँखा खुलाउँने जस्तो लागिरहेको । म विभिन्न संस्कृतिका, मान्छे र उनीहरूको धार्मिक विश्वासबारे पढ्न चाहन्छु ।” यी खेलाडीले लन्डन ओलम्पिकमा ५ स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी हुन् । उनले भनिन, “मेरो आफ्नै धर्म ईसाई हो तर मेरो रुचि हिन्दू धर
एउटा त्यस्तो अफ्रिकन देश, जहाँ ५६ प्रतिशत नागरिक हिन्दु छन्
अफ्रिका महाद्वीपको दक्षिणी किनारामा पर्ने मरिसस भन्ने देशमा ५६ प्रतिशत हिन्दु नागरिक बसोबास गर्छन भन्ने सायद धेरैलाई थाहा छैन । तर तथ्य यही हो । संसारमा नेपाल र भारत पछि सबभन्दा धेरै हिन्दुहरूको बसोबास भएको देश मरिसस हो । मरिसससँग नेपालको श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । मरिससमा हिन्दु पछि धेरै जनसंख्या क्रिश्चियनहरूको रहेको छ । लगभग २८ प्रतिशत जनसंख्या क्रिश्चियनको रहेको छ भने १५ प्रतिशत मुस्लिमको जनसंख्या रहेको छ । बौद्ध धर्म मान्नेहरू १ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । मरिससको संविधानले सबै धर्मको संरक्षण गर्ने नीति अपनाएको छ र भारतमा जस्तो धार्मिक विभेद देखिदैन । जबकी भारतमा करिब ७० प्रतिशत हिन्दु र २५ प्रतिशत मुस्लिम बसोबास गर्छन । नेपालमा भने हिन्दुहरूको जनसंख्या ८५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । दक्षिण अफ्रिकाको यस सुन्दर टापु पर्यटकीय स्थल पनि हो । संसारभरबाट वर्षेन
जब ७ देशको नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारले एसिया कप चुम्यो, खेलाडिको स्वागतार्थ राजानै एयरपोर्टमा
चारैतिरबाट नाकाबन्दीले घेरिएको मुलकु कतार अहिले खुसि मनाइरहेको छ। कतारले पहिलो पटक एसियन कपको उपाधी जितेपछि देशैभरनै उमंग छाएको छ। के विदेशी के कतारी सबै कतारवासी नागरिकहरु कतारले फुटबल जितेकोमा देशैभर खुसि मनाइरहेका छन्।शुक्रबार अबुधाबिस्थित जायेद स्पोर्ट्स सिटी रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा कतारले यो भन्दा पहिला लगातार ४ पटक एसिया कप जितेको जापानलाई ३-१ गोल अन्तरले हराएपछि एसियन कपको उपाधी हातपार्न सफल भएको थियो। विजेता कतारी खेलाडी हरुलाइ स्वागत गर्न दोहाको कर्निसमा हजारौंको संख्यामा फुटबल समर्थकहरु पुगेका थिए। कतार एअरवेजको जहाजबाट दोहा ओर्लिएका खेलाडीहरुलाई स्वागत गर्न हजारौंको संख्यामा आप्रवासीहरुको समेत उपस्थित रहेको थियो। कतारका अमीर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले प्रत्यक खेलाडीलाई अंगालो हालेर स्वागत गरेका थिए । शेख तमिम विन हमाद अल थानीले कतारको ऐतिहासिक उपलब्धिको अवसरमा खेलाडी, प्रसि
एजेन्सी। विश्वकै सर्वाधिक ठूलो सर्च इन्जिन गुगलले भारतकी एक युवतीलाई इन्जिनियरलाई १ करोड ७२ लाखभन्दा माथि तलब दिएको छ । बिहारकी मधुमिता कुमारलाई यति ठूलो अफर आएको हो । विश्वको ठूलो सर्च कम्पनी हो, गुगल । यही कम्पनीले मधुमिताका लागि वार्षिक १ करोड ८ लाख रुपैयाँ भारु (अर्थात १ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ) तलबको जागिर दिएको छ । स्विजरल्याण्डमा रहेको गुगलको अफिसमा टेक्निकल सोलुशन इन्जिनियरको रुपमा मधुमिताले सोमबार काम शुरु गरेकी छिन् । मधुमिता गुगलमा काम गर्नुपूर्व बैंगलुरुस्थित एपिजी कम्पनीमा काम गर्थिन् । उनका बाबु उनलाई पछिल्लो समय अमेजन, माइक्रोसफ्ट र मर्सिडिज जस्ता कम्पनीबाट पनि जागिरको लागि अफर आएको बताउँछन् । मधुमिताका बाबु छोरीको यो सफतला देखेर दंग छन् । पटनाको सटे खगौल क्षेत्रमा यो परिवारको अहिले निकै चर्चा भइरहेको छ । तर, कुनैबेला समय यस्तो पनि थियो कि, मधुमिताका बाबुले उनलाई इन्जि
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले बासिंटन डीसीस्थित चिल्ड्रेन्स नेशनल स्पताल पुगेर क्रिसमसको अवसरमा बालबालिकालाई उपहार बाँडेका छन्। सान्ता क्लजले लगाउने शीरमा रातो फ्लपी टोपी र काँधमा उपहारको पोको बोकेर उनी अस्पताल पुगेका थिए। ओबामालाई यस्तो अवस्थामा देखेर अधिकांश व्यक्तिहरू आश्चर्यमा परे। त्यसपछि उनले अस्पतालमा रहेका बिरामी बालबालिकालाई उपहार दिनुका साथै तस्वीरसमेत खिचाएको सार्वजनिक भएको छ। बासिंटन पोस्टका अनुसार उनले अस्पतालमा करिब डेढ घन्टा बिताएका थिए। उनले अस्पतालमा बालबालिकासँगै चिकित्सक तथा नर्ससँगसमेत भलाकुसारी गरेका थिए। बालबालिकालाई दिने उपहारको पोको बोकेर हिँडेका ओबामाको फोटो र भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको छ।
जापानद्वारा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने कानून पारित, सुरु कहिले देखि कस्तो छ प्रक्रिया ?
टोकियो (एजेन्सी)– कामदारको अभावलाई सहज बनाउनका लागि जापानको संसद्ले शनिबार एउटा कानून पारित गरेको छ। आफ्नो मुख्यनीति परिवर्तन गर्दै विदेशी कामदारलाई जापानमा काम गर्न दिनेबारेको कानुन आलोचनकैबीच शनिबार पारित भएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। हतारमा कानुन ल्याइएको र त्यसले स्वदेशी कामदारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने भन्दै सो कानुनको आलोचना पनि भइरहेको छ। नयाँ कानुन पारित भएपछि आउँदो अप्रिल महिनादेखि विशेषतः नर्सिङ, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा वैदेशिक कामदारले जापानमा काम गर्ने अनुमति पाउने छन् । आप्रवासनलाई लामो समयदेखि जापानमा प्रतिबन्धका रूपमा लिने गरिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको उमेरमा वृद्धि र काम गर्ने समूहमा भएको कमीका कारण देशमा विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने माग बढ्दैसमेत गएपछि सरकारले पछिल्लो कानुन पारित गरेको हो। विपक्षी दलले बाधा व्यवधान खडा गरेपनि शनिबार देशको माथिल्लो सदनल
तेहरान सङ्कट नेपालको लागि सिक्ने पाठ: जमिनमुनिको पानी धेरै तान्दा के हुनसक्छ ?
जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्यो र भूमिगत पानी ‘रिचार्ज’ हुन पाएन भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ? यसको पछिल्लो उदाहरण इरानको राजधानी तेहरानमा देख्न सकिन्छ। पश्चिम एसियाकै सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो सहर केही समययता निरन्तर भासिँदै गएको छ। भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले स्याटलाइट तस्बिर विश्लेषण गरी तेहरानका केही भाग वर्षको २५ सेन्टिमिटरका दरले भासिँदै गएको बताएका छन्। जर्मन रिसर्च सेन्टरका भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले सन् २००३ देखि २०१७ सम्मको स्याटलाइट तस्बिरका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको ‘नेचर डटकम’ ले लेखेको छ। उक्त रिसर्च सेन्टरले तेहरान र वरिपरिको भौगर्भिक अवस्थितिबारे अध्ययन गरिरहेको छ। करिब १ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको तेहरानमा खानेपानी तथा सिँचाइ निम्ति भूमिगत पानीको व्यापक प्रयोग हुन्छ। जमिनमुनिबाट अत्यधिक पानी खिच्दा भूमिगत स्रोत रित्तिन गई भासिन थालेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अ